အရိယသစ္စာ နဲ့ ပရမတ္တသစ္စာ အတူတူပဲဖြစ်ပါသည်ဟု ယူထား True Answer လို ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အရိယသစ္စာ နဲ့ ပရမတ္တသစ္စာ အတူတူပဲဖြစ်ပါသည်ဟု ယူထား True Answer လို ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်
အရိယသစ္စာ နဲ့ ပရမတ္တသစ္စာ အတူတူပဲဖြစ်ပါသည်ဟု ယူထား True Answer လို ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်
Posted by mgmaung on Jan 27, 2012 in Copy/Paste | 29 comments
တကယ့် အရိယာသစ္စာအစစ် နဲ့ ပရမတ္တသစ္စာ တူတူပဲဖြစ်ပါသည်ဟု True Answer က comment တစ်ခုတွင် ဆိုခဲ့ပါ၏။ သို့အတွက် ဤ post ကို ရေးဖို့ ဖြစ်လာရပါသည်။
ရုပ်နာမ် ရှုသော ပရမတ္တသစ္စာကိုပဲ အရိယာသစ္စာဟုဆိုရပါက ဗုဒ္ဓဘုရားပင် ပွင့်စရာအကြောင်းမရှိသင့်တော့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်
ပရမတ္တသစ္စာ (ရုပ်၊ နာမ်)တရားများက ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမပွင့်ခင်ကတည်းက ဂျိန်း နိဂဏ္ဍတို့၊ ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏားတို့ ဟောပြောနေကြသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
(ရုပ်၊ နာမ်) ပရမတ်တွေကို အဓိကထားရှုနေကြတဲ့ အစွန်းကိုရှောင်ပြီး လူ့ အမှုကံ (သင်္ခါရ)ကို အဓိက ထားရှုတဲ့ အရိယသစ္စာတရားကိုသာ ဗုဒ္ဓဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့ကြောင့် ထိုခေတ်က ပရိဗိုဇ်များက ဗုဒ္ဓကိုတွေ့သည့်အခါ
“(ရုပ်၊ နာမ်) ပရမတ်တွေက မြဲလား၊ မမြဲဘူးလား“ဟု မေးသည့် အခါတိုင်း
ဗုဒ္ဓက “န ခေါအဟံ” “ထိုအယူ ငါမယူဘူး။ ဒါတွေကို ငါစိတ်မဝင်စားဘူး“ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ ပြောဆိုခဲ့တာ အထင်းအရှားပါ။
(ကိုသစ္စာ၏ http://myanmargazette.net/95668/uncategorized-other/copypaste တွင် ဖော်ပြထားသည့် သုတ္တံများထဲတွင် (ရုပ်၊ နာမ်) ပရမတ်တွေက မြဲလား၊ မမြဲဘူးလားနှင့် ပတ်သက်လို့ ဗုဒ္ဓ၏ သဘောကို တွေ့နိုင်ပါသည်။)
ထိုအခါ ပရိဗိုဇ်တွေက “ဒီ (ရုပ်၊ နာမ်) ပရမတ်တွေကို မြဲလား၊ မမြဲဘူးလား ဆိုတာကို မယူဘူး။ စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင် ဘာလို့ ရဟန်းလုပ်နေတာလဲ “ဟု ပြန်မေးကြလေ၏။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုရသော် ထိုခေတ်က ပရိဗိုဇ် ရဟန်းများသည် ယနေ့ခေတ် ရိပ်သာများလို (ရုပ်၊ နာမ် ပရမတ်)တွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေကြလို့ ဖြစ်ပေသည်။
ထိုခေတ်က ဘာသာရေးလုပ်ငန်းသည် ယနေခေတ် မြန်မာဗုဒ္ဓဝါဒီ ရိပ်သာတရားစခန်းများကဲ့သို့ (ရုပ်၊ နာမ်) ပရမတ်တွေကိုသာ လုံးပန်းပြီးဟောပြောနေကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် (ရုပ်၊ နာမ်) ပရမတ်တွေ မြဲ၊ မမြဲကို ဘာမှမပြောသော ဗုဒ္ဓဘုရားကိုပင် ပရမတ်ဝါဒီတု့ိက ဘာသာမဲ့၊ ဘာသာတရားတွေကို ဖျက်ဆီးနေသူ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟု ပြောဆိုကြကုန်၏။
(ရုပ်၊ နာမ်) ပရမတ်တွေ မြဲ၊ မမြဲ ဟောမှ ဘာသာရေးဟု ထိုခေတ်က ယူထားကြပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားက “ငါရဟန်း (သာမဏ)လုပ်တာ၊
၁။ ဤ အမှု ကံ (သင်္ခါရ)တွေဟာ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း သမုဒယသစ္စာ တွေ၊
၂။ ဤ အမှု ကံ (သင်္ခါရ)တွေကြောင့် ဖြစ်နေရတဲ့ အဖြစ်တွေဟာ အမှန်ဆင်းရဲတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာ တွေ၊
၃။ ဤ အမှု ကံ (သင်္ခါရ)တွေ မလွန်ကျူးတော့ရင် ငြိမ်းအေးစေမယ့် နည်းလမ်းဖြစ်သည့် မဂ္ဂသစ္စာနဲ့
၄။ ဤ အမှု ကံ (သင်္ခါရ)တွေကြောင့် ဖြစ်နေရတဲ့ အဖြစ်တွေ အမှန်ငြိမ်းအေးသည့် နိရောဓသစ္စာ ဆိုသော
လူတွေ ငြိမ်းအေးစေတဲ့ အရိယသစ္စာတရားလေးပါးကို ဟောပြောဖို့အတွက် ရဟန်းပြုတာ” ဟု ပြန်ပြောကြားလေ၏။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ပရမတ်ဝါဒီမဟုတ်ပါ။ လူ့ အမှုကံတွေကို တည့်မတ်ပေးသော အရိယသစ္စာတရားပိုင်ရှင်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် ဗုဒ္ဓနှင့် တပည့်ရဟန်းများ လှည့်လည်ပြီး တရားဟောကြသည့်အခါမှာ ယနေ့ခေတ်လို ဟိုမှာဘယ်နှရက်တရားစခန်း ဖွင့်လိုက်၊ ဒီမှာ တရားစခန်း ဘယ်နှလ ဖွင့်လိုက်ဆိုတာမျိုး မရှိခဲ့ပါ။
စခန်းသွင်းပြီး လူတွေကို အမိန့်ပေးစေခိုင်းသည့် တရားမျိုးတွေနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားစခန်း၊ ရှင်မောဂ္ဂလာန် တရာစခန်း၊ ဘယ်သူ့တရားစခန်း၊ ဘယ်ဝါ့တရားစခန်း၊ – – – – စခန်းတွေ မဖွင့်ခဲ့ကြပါ။
ထိုကဲ့သို့ လူတွေကို အမိန့်ပေးစေခိုင်းသည့် တရားမျိုးတွေနှင့် တရားစခန်းတွေဖွင့်ခဲ့ကြသည်မှာ ထိုခေတ်က ဂျိန်း နိဂဏ္ဍတို့နှင့် တိတ္ထိပရိဗိုဇ်တို့သာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓ၏ အရိယသစ္စာတရားသည် လူတွေကို အမိန့်ပေးစေခိုင်းသလိုမျိုး ရှုခိုင်းနေသာ ပရမတ်သစ္စာတရား မဟုတ်သည့်အတွက် ယနေ့ခေတ်လို တရားစခန်းဖွင့်စရာမလိုခဲ့ပါ။
လူတွေ နေ့စဉ် ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်မှု ကံ (သင်္ခါရ)တွေကို ငြိမ်းအေးအောင် ပြုပြင်ပေးသော တရားသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
“အဝိဇ္ဇာ” တည်းဟူသော ကို်ယ့်အမှုတွေရဲ့ အကြောင်း၊ အကျိုးကို မသိမှု တွေနှင့်သာ ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်ကြမယ်ဆိုလျှင် သင်္ခါရ (အဘိသင်္ခါရ) မှားယွင်းသော၊ လွန်ကဲသော အပြုအမူ၊ အပြာအဆို၊ အနေအထိုင်တွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့ အပြုမှား၊ အပြောမှား၊ အနေထိုင်မှားတွေဖြစ်သွားပါက ရလာမည့် အဖြစ်တွေက ပြုသူ၊ ပြောသူ၊ နေထိုင်သူကို (အနိစ္စ)ပျက်စီးစေမယ်၊ (ဒုက္ခ) ဆင်းရဲစေမယ်၊ (အနတ္တ) အချီးအနှီး ဖြစ်စေမယ်၊ စသည့် သဘောလက္ခများဖြင့် (ဒုက္ခသစ္စာ) အမှန်းဆင်ရဲမည့် အဖြစ်တွေပဲ သေချာပေါက်ရမှာပါ။
ထိုအဖြစ်တွေကို အမှန်းဆင်ရဲမှန်း “ဝိဇ္ဇာ”ဆိုတဲ့ အသိရလာပါက ထိုသူသည် နောက်နောင် ထိုကဲ့သို့ သင်္ခါရ (အဘိသင်္ခါရ) ဖြစ်အောင် မပြုရဲတော့ပါ။
ထို့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်မှုတွေကို လွန်ကျူးမှုမဖြစ်အောင် ပြုတတ်၊ ပြောတတ်၊ နေထိုင်တတ်သွားသည့်အတွက် အမှန်းဆင်ရဲမည့် အဖြစ်တွေ ဘယ်တော့မဖြစ်တော့ပဲ (ဒုက္ခနိရောဓ) အပြီးငြိမ်းအေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့ လူတွေရဲ့ အမှုကံတွေ မလွန်ကျူးဖို့အတွက် အသိပေးကျင့်သုံးဖို့အတွက်မှာ တရားခန်းတွေဖွင့်စရာ မလိုခဲ့ပါ။
လူတွေရဲ့ နေ့စဉ် ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်မှုတွေမှာ ထိုအသိဖြင့် ကျင့်သုံး သွားဖို့ရာသာ လိုအပ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ဟိုအရင် နေ့ရက်များဆီက ရိပ်သာများတွင် ပရမတ္တသစ္စာ (ရုပ်၊ နာမ်)တရားများဖြင့် အချိန်တွေကုန်ခဲ့ရာမှ ဗုဒ္ဓ၏ အရိယသစ္စာကို အင်တာနက်မှတဆင့် ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော် ဟောပြောမှုများနာကြားခဲ့ရသည့်အတွက် အရိယသစ္စာနှင့် ပရမတ္တသစ္စာ ကွဲကွဲပြာပြားသိရှိခဲ့ရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကွဲကွဲပြားပြားသိရှိခဲ့ရသည့်အပေါ် ကျွန်ုပ်သဘောပေါက်နားလည်သလို ပြန်လည်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လူ့အမှု ငြိမ်းစေသည့် အရိယသစ္စာကို လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သော ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ကို http://www.ariyathitsa.org/html/home_3.html ရှိ
ဆရာတော်၏ ပရမတ္တသစ္စာနှင့် အရိယသစ္စာ လင်္ကာဖြင့် ဦးခိုက် ပူဇော်လိုက်ပါသည်။
ပဿံ နရော ဒက္ခတိ နာမ ရူပံ၊
ဒိသွာန ဝါ ညထာတိ တာနိ မေဝ၊
ကာမံ ဗဟုံ ပဿတု အပ္ပကံ ဝါ၊
န ဟိ တေန သုဒ္ဓိံကုသလာ ဝဒနိ ္တ။
ရုပ်၊ နာမ် ရှုပွား တရားကို ရှာ၊
ရုပ်၊ နာမ် ဖြစ်ပျက် မြင်လျက်သိမှာ။
ဘယ်လောက် ရှုမှတ် ပရမတ်သစ္စာ၊
ဝစသာ မနသာစ ကမ္မုနာ စ၊
အဝိရုဒ္ဓော သမ္မာ ဝိဒိတွာန ဓမ္မံ။
နိဗ္ဗာန ပဒါဘိ ပတ္ထယာနော၊
သမ္မာ သော လောကေ ပရိဗ္ဗဇေယျ။
ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်ထား အမှားရှောင်ခွါ၊
တရား၊ မတရား ပြတ်သားသိခါ၊
မြတ်တရား မမှား ကျင့်ရမှာ။
အေး ပါကွာ အရိယာသစ္စာ တကယ်သိမသိ သေခါနီး အဖြေပေါ်မှာပါ။ ဒီလင့်လေးတော့ ကြည့်လိုက်ပါ
(အေး ပါကွာ အရိယာသစ္စာ တကယ်သိမသိ သေခါနီး အဖြေပေါ်မှာပါ။) ဆိုတာ ဘာအဖြေကို ပြောတာပါလိမ့်၊
ယခု အရိယသစ္စာကို ညွှန်ပြနေသူကလည်း လူတွေကို မကောင်းတာတွေ လုပ်ခိုင်းနေလို့လား။
လူတွေရဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ကံ အမှုတွေ ဖြစ်တဲ့ အပြု၊ အပြော၊ အနေတွေကို လွန်ကျူးတဲ့ မကောင်းမှုတွေမပြုမိအောင် လမ်းညွှန်နေတာလေ။
ယခု ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကောင်းတဲ့ အမှုတွေနဲ့ ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်၊ နေထိုင်နေတဲ့သူဟာ သေခါနီး ဘာအဖြေတွေစောင့်နေရမှာလဲ။
သေရင် ပျော့ပြောင်းတာတွေ၊ မပုတ်တာတွေနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသိဉာဏ်ကို အဖြေမထုတ်ချင်ပါနဲ့၊ အဲဒါက စိတ္တဇအယူတွေပါ။
သေတဲ့အခါမှာ ပျော့ပြောင်းချင်တယ်။ မပုတ်ချင်ဘူးဆိုရင် အခုကတည်းက ပိုက်ဆံများများရှာထားပေါ့။ ဆေးထိုးအတွက် ဆေးဝယ်ထားဖို့လေ။
ဘယ်နှစ်ရက် ၊ ဘယ်နှစ်လလောက်မပုတ်မသိုးပဲ ထားချင်လဲ။
အဲဒါတွေက လူတစ်ယောက် အရိယသစ္စာသိတာ မသိတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက် တရားသိတယ်၊ မသိဘူးဆိုတာကို သေတာနဲ့ သွားမတိုင်းလိုက်ပါနဲ့၊
သူရှင်သန်နေထိုင်တဲ့အခါမှ ဘယ်လိုနေထိုင်၊ ပြုမူ၊ ပြောဆိုသွားသလဲဆိုတာနဲ့သာ တန်ဘိုးသတ်မှတ်ကြည့်ပါ။
[[ သေရင် ပျော့ပြောင်းတာတွေ၊ မပုတ်တာတွေနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသိဉာဏ်ကို အဖြေမထုတ်ချင်ပါနဲ့၊ အဲဒါက စိတ္တဇအယူတွေပါ။
အဲဒါတွေက လူတစ်ယောက် အရိယသစ္စာသိတာ မသိတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ]]
ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊ စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ။
အသောကံ ဝိရဇံ ခေမံ၊ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
ဆိုတာတော့ ကြားဖူးမှာပေါ့။ တကယ်က လောကဓံတရားနဲ့ ကြုံရင် အရိယသစ္စာ တကယ်သိမသိအဖြေပေါ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်စစ်တတ်ရင်ပေါ့။
အခု ဦးဉာဏထောင်ချခံရတယ်။ တရားတာ မတရားတာ ခဏထား။
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တုန်လှုပ်ခြင်းကင်းသလား မကင်းဖူးလား။ မကျေမနပ်ဖြစ်နေသလား၊
မိမိဖာသာအသိဆုံးပါ။ သူများတွေကိုလိမ်နေတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်တာ အနာဆုံးပါ။
“အရိယာသစ္စာ တကယ်သိမသိ သေခါနီး အဖြေပေါ်မှာပါ” ဆိုတာကတော့ …..
လောကဓံတရားကြုံရမှာ သေဘေးနဲ့ ကြုံရတာဟာ ကြီးမားသော တုန်လှုပ်စရာ လောကဓံ ပါ။ သေခါနီး ရောဂါဝေဒနာရဲ့ နာကျင်ခံခက်ဖြစ်နေချိန် ….
အရိယာသစ္စာရှင်ကြီးများ အေးချမ်းစွာ မတုန်လှုပ်ပဲ ရင်ဆိုင်နိုင်သလား။
အမလေး ကယ်ပါယူပါ နဲ့ အော်ဟစ်ကာ မကျေမနပ်ဖြစ်နေသလား ဆိုတာ ကို ပြောတာပါ။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ၏ ပြုံးသေ၊ မဲ့သေတရား၊ သဲအင်းဂူဆရာတော်ကတော့ တရားတော်ကြီး၏ နေနည်း၊ သေနည်း တရားတော်များ က သေခါနီး ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေသလား ၊ မတုန်မလှုပ်ရင်ဆိုင်သလားဆိုတာ
တရားတကယ်သိမသိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြား လက်တွေ့ပြသွားခဲ့ ပြီးပါပြီ။
အရိယာသစ္စာရှင်ကြီး များ ကိုယ်တိုင် သေဘေးကြုံရင် (သို့) လောကဓံတရားနဲ့ကြုံချိန်မှာ အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ကို်ယ့်စိတ်ကို သတိထား အကဲခတ်တတ်ရင်ပေါ့၊ သတိပဌါန်သုတ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်းပေါ့။
မြတ်စွာဘုရား ရှင်နဲ့တကွ အရိယာသူတော်ကောင်းများ သူတပါး၏ မတရားလုပ်ခံရချိမှာလည်း အေးဆေးစွာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
ဟိုလူ့ အပြစ်တင်၊ ဒီလူ့အပြစ်တင်၊ ဟိုအဖွဲ့ကို မကျေနပ်၊ ဒီအဖွဲ့ကိုမကျေနပ်၊ ဟို နား ပြေးအော်၊ ဒီနားပြေးအော်၊ ဟိုဝါဒကို ပုတ်ခတ်၊ ဒီဝါဒကို ပုတ်ခတ်နဲ့ ယောက်ယက်ခတ်နေခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း အပြောမဟုတ် လက်တွေ့သင်ပြသွားခဲ့ပါသည်။
(ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊ စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ။
အသောကံ ဝိရဇံ ခေမံ၊ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။) မှန်ပါ၏ True Answer ခင်ဗျာ။
လောကဓံတရားတွေအပေါ်မှာ ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော် တုန်လှုပ်ခြင်းကင်းစွာ ဘယ်လို ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့တယ်ဆိ်ုတာကို ဆရာတော်နှင့် အနေနီးသူများအသိပါ။ True Answer လည်း ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်နဲ့ အနေနီးခဲ့ရင် တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ ကြည်ညိုသွားမှာပဲ။
အခုက အပုတ်ချပြောဆိုနေသူတွေရဲ့ စကားမှာ လမ်းဆုံးနေတဲ့ True Answer ရဲ့ မကျေနပ်တဲ့ အတွေးတွေက ထွက်လာတဲ့ ပေါက်ကွဲ သံစဉ်တွေပါ။
ထောင်ထဲမှာ ဆရာတော်နဲ့အတူ နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ လွတ်လာတဲ့ ကိုဇာဂနာအပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို မေးကြည့်ရင် လောကဓံအပေါ် ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရဲ့ သဘောထားကို သိနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တိုင်းတပါးကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားပေးခဲ့တာ “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း”။
အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ခံဘဝက လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားပေးနေတာ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”။
ဟိန္ဒူ၊ ဂျိန်း ပရမတ္တသစ္စာအယူဝါဒ လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ခံနေရတဲ့ ဘဝမှ လွတ်မြောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရား၏ အရိယသစ္စာပြန်လည်ထွန်းကားအောင် ဘဝနှင့်ရင်ပြီး အနစ်နာခံ စွမ်းဆောင်ပေးနေတာက “ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော် ရှင်ဉာဏ”ပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ကိုဇဂနာကို ဗွီအိုအေ ဝိုင်းတော်သူ မစုမြတ်မွန်က သွားရောက် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ကိုဇဂနာက
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အညတရ သူရဲကောင်းဆု ပေးလိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီး ဦးဉာဏ ကျနော်နဲ့အတူတူ (မြစ်ကြီးနားထောင်ထဲမှာ)ရှိခဲ့တယ်။”လို့ တန်ဘိုးသိနေတဲ့ သူတွေက ဖော်ထုတ်နေပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်နေတုန်းကတောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတောင် ဆုငွေ ၅-ကျပ်နဲ့ ဝရမ်းထုတ်ပြီး ဖမ်းခိုင်းသေတာ ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ထောင်ကျနေတာလဲ ဘာဆန်းသေးလို့လဲ။
ဘုရားတောင်မှ အဲဒီခေတ်က မလိုတဲ့သူတွေက သေဖို့အထိတောင်လုပ်ကြံကြသေးတာပဲ။
အများအကျိုးအတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံလုပ်ကြတဲ့ သူတွေဟာ ဒီလိုပဲ အနစ်နာခံတတ်ရစမြဲပါ။
(ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ ပန်းပန်လျှက်ပဲ။)
အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်နေတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတောင် ဆုငွေ ၅-ကျပ်နဲ့ ဝရမ်းထုတ်ပြီး ဖမ်းခိုင်းသေးတာ ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ထောင်ကျနေတာလဲ ဘာဆန်းသေးလို့လဲ။
အရိယာသစ္စာအစစ် နဲ့ ပရမတ္တသစ္စာ တူတူပဲဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ကား Trueanswer ရေ Wronganswer လို့ ဘယ်တော့ ကင်ပွန်းတပ်မလဲ၊
ကို်ယ့်လူကလည်း သေသေချာချာ မသိပဲနဲ့များ အတူတူပဲလို့ သွားရောချတာကို။
နို့မို့ရင် ဂျိန်းသာသာနာပြု ဂျိန်းဒကာကြီး ဖြစ်နေဦးမယ်။
ကိုယ့်လူ ညွှန်တဲ့ Link က သင်္ကန်းအဝါရောင်ဝတ်ထားတဲ့ ဂျိန်းပရမတ်တွေဟောပြနေတဲ့ မြန်မာပြည်ပေါက်ဘုန်းကြီးပဲ။
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု လား၊ ဂျိနဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု လား။ကွဲပြားအောင် လုပ်ဦးလေ။ ရောမချနဲ့တော့။ သိအောင်ပြောနေတဲ့ သူတွေက ကွဲပြားအောင်ပြောနေကြပြီပဲ၊
ဟူး ငါကလည်း comment တွေ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်နေတာ၊ မနေနိုင်တော့ ဝင်ပါပါမိနေပြီ။
အရိယာသစ္စာအစစ် နဲ့ ပရမတ္တသစ္စာ တူတူပဲဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ကား Trueanswer ရေ Wrouganswer လို့ ဘယ်တော့ ကင်ပွန်းတပ်မလဲ၊
ဟေ့ယောင် .. အရည်မရ အဖတ်မရ လာပြောမနေနဲ. မှန်တယ်ထင်ရင်
မင်းတို.ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော် ကိုငါတို.သီတဂူဆရာတော် ဆီလာ ငြ င်း ခိုင်းလိုက်
ဒါမျိုးတွေက ဘုရားလက်ထက် ထဲက … ဘုရားကိုယ်တိုင် နှိမ်နင်းလာတာ…
မှန်တယ်ထင်ရင်တက်လာလိုက်…. ချောတိုင်ပေါ်က သပိတ်ယူတဲ့ပုံစံ လာချိုးမနေနဲ. ရှင်းတယ်နော်..
သီတဂူဆရာတော်ကိုယ်တိုင်တောင် ဒီနောက်ပိုင်းတရားတွေမှာ ပရမတ္တသစ္စာနဲ့ အရိယသစ္စာ မတူကြောင်းတွေ ဟောနေရပါပြီ။
သမိုင်းသိမြင်၊ ဗဟုသုတနှံစပ်သော သီတဂူဆရာတော်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင် ပရမတ္တသစ္စာဟာ အရိယသစ္စာလို့ စွတ်မပြောရဲတော့ပါဘူး။
ကမ္ဘာ့ခေတ်အမြင်ရှိတဲ့ သီတဂူဆရာတော်သည် အယူဝါဒအစွဲတွေနဲ့ တစ်ဖက်သတ် မဟောတော့ပါ။
ဟောခဲ့ပါက ဟောသူမှာသာ သမိုင်းတွင် တာဝန်ရှိတော့မည်ကို သိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အယူဝါဒကွဲတွေအပေါ် သီတဂူဆရာတော်ထားသည့် သဘောထားကို
http://www.4shared.com/video/_dbflfyd/skyblue-a.html?cau2=403tNull တို့ကို ဖွင့်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါသည်။
ကို အတတ်နိုင်ဆုံးဖယ်ထုတ်ပြီး….လောကနဲ့ဆက်ဆံမှုအတွက်…သဘာဝကျ…မကျကို ကိုယ်တိုင်ပိုင်း
အော်တကယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က comment ရေးဖို့နေနေသာသာ log In တောင်မဝင်ဖြစ်ဘူး ဒီအတိုင်း ဖက်ပြီးပြန်တာ များပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုတလော အရိယာသစ္စာ အကြောင်း ပြောနေတာကြားနေရပါတယ် အရိယာသစ္စာ ဆိုတာ အရိယာ သူတော်စဉ်များသာ သိမြင်နားလည်သော တရားဖြစ်ပါတယ် တနည်းဆိုရင် ရဟန်းတာပေါ့ အခုတော့ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေသည်မသိသော သူများကပါ ဒီတရားတွေ ပြောနေတော့ ဘယ်လိုနားလည်ရမည်မသိ သေသေခြာခြာသိချင်ရင် အဘိဓမာကို လေ့လာပါ သင်ယူပါ မှတ်သားပါ ဒါဆိုမငြင်းရတော့ပါဘူး
ps; ဓမ္မဝိဟာရီ နဲ့ မိုးပြာ နဲ့ မဟာယာန(အခွဲ) အတူတူပဲလား တရားကိုပြောပါတယ်
poeaung6 သင်ယူခိုင်းနေတဲ့ အဘိဓမ္မာဆိုတာကြီးက ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတရား မဟုတ်ဘူးကွ။
ဗုဒ္ဓတရားတွေထဲသို့ တတိယသင်္ဂါယနာနောက်ပိုင်းမှ ဝင်လာခဲ့တာ http://myanmargazette.net/author/realman အဲဒီမှာ ရီရဲမင်းဆိုသူ ရေးထားတယ်။ လေ့လာကြည့်ဦး။
အင်ကြီးကို အမှန်အကန်ထင်နေရင် အလကားပဲ။
အခုထေရဝါဒကြီးက အော်ရဂျင်နယ် ထေရဝါဒမဟုတ်တော့ဘူး။ အရောတွေ အများကြီးပဲ ပါနေတယ်။ အဲဒါ သဘောပေါက်။
မိုးပြာတို့၊ မဟာယာယာနတို့၊ ထေရဝါဒတို့ဆိုတဲ့ ဝါဒတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓတရားကို အပိုင်သိမ်းပြီး ဘောင်ခတ်ဖို့ လုပ်မနေနဲ့တော့။
မြတ်စွာဗုဒ္ဓက ငြိမ်းချမ်းရေး အရိယသစ္စာတရားတွေပဲ ဟောခဲ့တာ။
အဘိဓမ္မာ (ပရမတ်)တွေနဲ့ ရှုပ်မနေနဲ့တော့။
သမိုင်း အမှန်မသိရင် ညှပ်ချတာခံနေရတဲ့ “လူအ”တွေ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
ဒါက သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောတာ။
သမိုင်း အလွဲသိနေရင်လည် အလုပ်တွေပါ လိုက်လွဲနေလို့ “လူပေါ”တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
poeaung6 က လူသစ်လေမို့ မဖြစ်မနေ comment ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ ရေးလိုက်တာ။
ကြိုက်၊ ကြိုက်၊ မကြိုက်ကြိုက် သီးခံလို့သာ ဖတ်ပေတော့၊
ပြောင်းပြန်တွေ ပြောနေပါသည်… ကောင်းမှုလုပ်၍ ကောင်းကျိုးရပြီး မကောင်းမှုလုပ်၍ မကောင်းကျိုးရခြင်းဟူသော ကံဝါဒသည် ဘုရားရှင် မပွင့်မီကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ကမာ္ဘ့နိယာမတရားဖြစ်သည် ။ ရုပ် ၊ နာမ် ၊ ပရမတ္ထ တရားတို့သည်သာ ဘုရားရှင် ပွင့်ထွန်းလာမှ ကြားနာကြရ သိကြရခြင်းဖြစ်သည် ။ ဘုရားရှင်သည်သာ ကံဝါဒ ဆိုပါက စိတ် ၊ စေတသိက် ၊ ရုပ်တို့အကြောင်းကို အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတစ်ခုလုံးစာ ဟောကြားထားစရာ အကြောင်းမရှိချေ…။ မိုးပြာဝါဒရှင်တို့သည် အဘိဓမ္မာ တရားတော်ကြီးကိုပင် ဘုရားဟော မဟုတ်သယောင်ယူဆနေကြသည် ထင်ပါသည် ။ အလွန်ခက်ခဲနက်နဲသော တရားတော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အဘိဓမ္မာဟုပင် အမည်တွင်ရသော တရားတော်ကြီးကို မည်သို့မျှ သာမာန်လူ၏ ဉာဏ်ဖြင့် ကြံစည်တွေးတော လုပ်ကြံဟောပြောနိုင်မည် မဟုတ်ပါ…။ ထိုဉာဏ်တော်ကြီးကိုပင် ရည်မှန်းကာ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရည်စူးပူဇော်ရပါသည် ။ ထိုအဘိဓမ္မာတရားကို မြတ်စွာဘုရားရှင်က နတ်ပြည်တွင် အကျယ်ဟောကာ ရှင်သာရိပုတ္တရာအား အကျဉ်းဟောပြ၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာက လူတို့အား မကျဉ်းမကျယ်ပြန်လည်ဟောပြသည်ဟု မှတ်သားရပါသည် ။ ထိုအချက်အားထောက်ကာ… အချို့ အနောက်တို်င်း ပညာရှင်တို့က အဘိဓမ္မာသည် ဘုရားဟောမဟုတ်ဟု ပြောဆိုကြပါသည် ။ အကယ်၍(အကယ်၍ဟု ပြောပါသည် ) အဘိဓမ္မာသည် ဘုရားဟောမဟုတ် ၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဟောပြောသည် ဟုပင် ယူဆကြည့်ကြပါစို့…။ ထိုမျှခက်ခဲနက်နဲသော တရားကို ဟောပြောနိုင်သော ဉာဏ်ကြီးရှင်ကပင် ဆရာတင်ရသော ရှင်တော်ဘုရား၏ ဉာဏ်တော်ကို မှန်းဆသိမြင်နိုင်ပါသည် ။ အကယ်၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာကသာ လူတို့အား ဘုရားရှင်၏ အယူမဟုတ်သော ရုပ် ၊ နာမ် တရားများကို ဟောပြောခဲ့သည်ဆိုလျှင် ထိုစဉ်ကပင် ဘုရားရှင် တားမြစ်တော်မူမည် ဖြစ်ပါသည်…။ ဂေဇက်ရွာသူရွာသားများ ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြစေလိုပါသည် ။ ဆံပင် ၊ အသား ၊ အရေ ၊ အရိုး စသဖြင့် ၃၂ ကောဌာသ အား ကမ္မဌာန်း ရှုခိုင်းကာ ဆံချနေစဉ်မှာပင် ရဟန္တာဖြစ်သွားကြသူများ အပုံကြီးပင် မဟုတ်ပါလား…။ ၎င်း ၃၂ ကောဌာသအား ရှုခြင်းက ရုပ် ၊ နာမ်ရှုခြင်းမဟုတ်ဘူးလား…။ ကံကြောင့် နာမ်ရုပ် ၊ နာမ်ရုပ်ကြောင့် ကံ … အကြောင်းအကျိုးစပ်ဆက်ပြီး ဖြစ်နေတယ်လို့ ဘုရားရှင်က ဟောကြားခဲ့တာပါ…။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ လူပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါတွေရဲ့ အကြိုက် စရိုက် အိန္ဒြေအလိုက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရာရောက်ကြောင်းအား… ဒါန ရှေ့သွားဟောတော်မူခြင်း ၊ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတို့အား စောင့်ရှောက်စေလျက် သီလရှေ့သွား ဟောတော်မူခြင်း…၊ ရုပ်နာမ်တရားတို့ အဖြစ်အပျက်အားဖြင့် ဟောတော်မူခြင်း.. ၊ လောကနိယာမတို့၏ အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ခြင်းအားဖြင့်ဟောတော်မူခြင်း… စသဖြင့် အနည်းနည်း အလမ်းလမ်းနဲ့ ဟောကြားတော်မူခဲ့တာပါ….။ ကိုယ်လိုတာလေးပဲ ဆွဲထုတ်ဆွဲယူပြီး…. ဘုရားရှင်က ဒီလိုပဲ ဒါပဲ ဟောခဲ့သလိုလိုနဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကို မဖျက်ဆီးကြပါနဲ့ဗျာ….။
မဟာယာနတွေမှ ဗုဒ္ဓက အဘိဓမ္မာတရားကို နဂါးပြည်မှာ ဟောသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။
ထေရဝါဒတွေကလည်း အားကျမခံ အဘိဓမ္မာတရားကို တာဝတိ ံတာတွင် ဟောသည်ဟု တတိယသင်္ဂါယနာတင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့က လုပ်လိုက်ကြပြန်ပါသည်။
စာရေးဆရာများက ယုတ္တိယုတ္တာရှိအောင် ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နဲ့ တန်ဆာဆင်ပြီး ရေးခဲ့ကြလို့ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ နစ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပထမသင်္ဂါယနာနဲ့ ဒုတိယသင်္ဂါယနာတင်တဲ့ အချိန်ထိ ဓမ္မ (သုတ္တံတရား)နှင့် ဝိနယ (ဝိနည်းတရား)သာ သင်္ဂါယနာ တင်သည်ဟု သိရပါသည်။ အဘိဓမ္မာကို သင်္ဂါယနာတင်သည်ဟု မတွေ့ရပါ။
တတိယသင်္ဂါယနာနောက်မှ မဟာယာန အဘိဓမ္မာကျမ်းတွေကိ်ု အားကျမခံ ထေရဝါဒီတွေက ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားပဲ ဟောခဲ့သည့်ပုံစံဖြင့် ရေးသားခဲ့ကြသည်ဟု တွေ့ရပါသည်။
အထက်ပါအချက်များကြောင့် အဘိဓမ္မာ ဘုရားဟော၊ မဟောကို ပညာရှင်များအားလုံး သဘောတူ အတည်မပြုကြပါ။
ထေရဝါဒအယူယူသောနိုင်ငံများတွင်ပင်လျှင် အဘိဓမ္မာကို ဘုရားကိုယ်ဆိုင်ဟောခဲ့ပါသည်ဟု တရာသေလှေနံဓားထစ်ယူထားသူများမှာ မြန်မာပြည်မှ ပရမတ်ဝါဒီ အဘိဓမ္မာဘုန်းကြီးတွေပင်ဖြစ်ပေသည်။
ယိုးဒယားနိုင်ငံနှင့် ကျန်ထေရဝါဒနိုင်ငံတိုမှ အဘိဓမ္မာကို ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောသည်ဟု အစွဲမသန်နိုင်ကြတော့ပါ။
အဘယ့်ကြောင်းဆိုသော် အသိအမြင်များ တိုးပွားလာလို့ဖြစ်ပါသည်။
တကယ်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘုရား လေးဆယ့်ငါးဝါကာလပတ်လုံး မရပ်မနား အပင်ပန်းခံ ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် တရားတော်များမှာ လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းစေသည့် လူ့အမှုလမ်းညွှန် အရိယသစ္စာတရားလေးပါးသာလျှှင်ဖြစ်ပါသည်။
(အကျယ်သိလိုပါက ယနေ့သာသာနာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ e-book
ရုပ်၊ နာမ်တွေ ခွဲစိတ်နေလို့ လူ့အမှုတွေ ငြိမ်းနိုင်မလား?
လူ့ အမှု ကံ (သင်္ခါရ)တွေကို ပိုင်းခြားသိမှ လူ့အမှုတွေ ငြိမ်းနိုင်မလားဆိုတာကို ဝါဒအစွဲမသန်တဲ့ စိတ်ထားဖြင့် ပိုင်းခြားဝေဖန်ကြည့်စေလိုပါသည်။
မြန်မာထေရဝါဒစွဲဘုန်းကြီးတွေပြောတဲ့ တစ်ဖက်သက် အသိတွေနဲ့ကတော့ “မင်္ဂလာ”နဲ့ ဝေးနေဦးမှာပဲ။
ဓါးကောင်းကြောင်းကြွားဝါနေခြင်းထက် ပြတ်အောင် ခုတ်နိုင်ဖို့က အဓိကလို့ ဆိုချင်ပါသည် ။
ငြိမ်းချမ်းမှု အတွက် ဘယ်ဟာ ကောင်းသည် မကောင်းသည်ထက်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ငြိမ်းချမ်းအောင် နေနိုင်ဖို့သာ အဓိကဖြစ်ပါသည် …။
လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင် အသိဉာဏ်အတွက် လွတ်လပ်ပါသည် …။
ထို့ကြောင့် အကြောင်းအရာတိုင်းအတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ်ပိုင် အသိဖြင့်သာ တွေးခေါ်ကြည့်စေလိုပါသည် …။
သူများပြောလို့ လိုက်ပြောသည်ထက် ကိုယ်တိုင် သိပြီး ပြောခြင်းက နောင်တကင်းပါသည် ..။
သက်ရှိတိုင်းမှာ ရုပ်ကိုမှီပြီး စိတ် ဖြစ်တည်သလို စိတ်ကိုလည်း ရုပ်က မှီနေရပါသည် ။
အကြောင်းကြောင့် အကျိုး ဖြစ်နေတာကိုတော့ သတိထားစေချင်ပါသည် ။
ဘယ်အရာကို ကိုးကားပါသည်ထက် .. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြည့်ဝပြီးမှသာ ပညာရဲရင့် ပွဲလယ် တင့်စေချင်ပါသည် ။ လူတိုင်းအတွက် .. ကာလမ သုတ်ကို နားလည်အောင် ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည် ။ ပါဠိလို မရပါက အနက် ပြန်ထားတာ ရှိပါသည် ။ တွေးခေါ်မှု သည် ချောက်ကမ်းပါပေါ် လမ်းလျှောက် နေရသည်နှင့် တူပါသည် ။ ပညာမရှိပဲ တွေးခေါ်က အန္တရာယ် ကြီးလှပါသည် ။ စပါးနှံ ဥပမာ ၊ မပြည့်သော အိုး ဥပမာ များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြင်နိုင်မည်ထင်ပါသည် ။
( ဝန်ခံချက် ။ ။ ကျနော်သည် ပြီးပြည့်စုံသောသူ မဟုတ်ပါ ။ မိမိအတွေးမှာ လက်ခံထားမိသလောက်သာ ဝင်ဆွေးနွေးမိပါသည် ။ မိမိထက်ပိုသိ ပိုတတ်သူများအမြင်မှာ အမှားတွေ့ပါက တောင်းပန်အပ်ပါသည် ။)
သစ္စာနှစ်ခု ၊ ဇွတ်ငြင်းလုရင်း
မုန်းခြင်း ချစ်ခြင်း ၊ ရန်မူခြင်းတို့
အလျင်းပြည့်စုံ ၊ မြန်မြေဘုံသည်
သူကစိန်ခေါ် ၊ ငါစိန်ခေါ်နှင့်
တော်တော် မတော်တော် ၊ ကျော်မော်လိုငြား
အို လူသားတို့ ၊ တို့များတိုင်းပြည်
ဒီမိုကရေစီ ၊ ကျင့်သုုံးမည်မို့
တည်တည်တံ့တံ့ ၊ ခန့်ခန့်ထည်ထည်
အရည်အသွေး ၊ ကောင်းသောသွေးတို့
မွေးနိုင်ဖို့ရေး ၊ လုပ်ဆောင်ပေးသော်
တို့ပြည်တော်ကား ၊ လွန်စည်ကားလိမ့်။
တို့ကားမဟုတ် ၊ တို့လုပ်မမှန်
တို့အကြံမှား ၊ စွဲမြဲသွားသော်
နောက်သားနောင်လာ ၊ တို့မျိုးဟာဖြင့်
လွဲကာ မွဲကာ ၊ ချို့တဲ့ကာဖြင့်
တို့သည်သစ္စာ ၊ တို့မှန်ပါသော်
ပြည်တော်သာယာ ၊ လွန်ချမ်းသာလိမ့် ။
တို့ဟာသာမှန် ၊ သူမမှန်လို့
ငြင်းပြန်ဇွတ်တိုက် ၊ မိုက်ကြီးမိုက်သော်
တို့နော ်မကောင်း လေစွာ့တကား။
ကြမ်းကျွံရင်နုတ်ရတယ်၊ စကားကျွံရင် နုတ်မရဘူးနော်၊ ဆရာတော် ဦးဉာဏိဿရ ကိုယ်တိုင်မက တကယ့် စာပေနှံစပ်သော ဆရာတော်တိုင်းသိပါတယ်။ သိတာကို သိတဲ့အတိုင်းရိုးသားစွာ ပြောရင်ပေါ့ဗျာ။ သစ္စာမှာ သုံးပါးရှိတယ်။ သမုတိ၊ ပရမတ်၊ အရိယသစ္စာ ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒါလည်း သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် တရားတစ်ပွဲမှာ ထည့်ဟောသွားတာကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်နာယူဖူးပါတယ်။ လိုင်းယင်းကင်း ရေးတဲ့ ကဗျာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ အမြင်ကတော့ သမုတိလည်း မှန်တယ်၊ ပရမတ်လည်းမှန်တယ်၊ အရိယ လည်း မှန်တယ်။ မှန်လို့ကို ဒီအခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းတွေနောက်မှာ သစ္စာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ထည့်သုံးထားတာပါ။
အဓိကအရေးအကြီးဆုံးသိဖို့လိုတာက သစ္စာတစ်ခုမှ နေပြီး ကျန်တစ်ခုကိုတော့ သွားမကြည့်လိုက်ပါနဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကျန်တစ်ခုသည် အမှန်အဖြစ် မမြင်နိုင်ပါဘူး။ အရိယသစ္စာ ကတော့ ထိုသို့မဟုတ်။
သမုတိသစ္စာနှင့် ပရမတ်သစ္စာတို့သည် တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ အကြည့်ခံ/အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်း မရှိသော သစ္စာများသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်သစ္စာက ဘယ်လို အစစ်ဆေးခံနိုင်ပြီး ဘယ်သစ္စာက ဘယ်လို အစစ်ဆေး မခံနိုင်လဲ ကို ဉာဏကျော်ရဲ့ ။ နည်းနည်း ရှင်းပြပါဦး….။
သမုတိသစ္စာ၊ ပရမတ္တသစ္စာ၊ အရိယသစ္စာ ဒီသစ္စာသုံးမျိုးရဲ့ သဘောကိုကွဲကွဲပြားပြားသိလိုလျှင် ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်၏ ဓမ္မစကြာ၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၊ သတိပဋ္ဌာန်စသည့် တရားများကို ဖွင့်ဆိုရေးသားထားသည့် “ဓမ္မ” အမည်ရှိ http://sites.google.com/site/sayamvasi/003-Dhamma.PDF?attredirects=0 e-book ကို လေ့လာကြည့်ပါက သိရှိနိုင်ပါသည်ဟု ကြားထဲက လမ်းညွှန်လိုက်ပါသည်။
“သစ္စာမှာ သုံးပါးရှိတယ်။ သမုတိ၊ ပရမတ်၊ အရိယသစ္စာ ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒါလည်း သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် တရားတစ်ပွဲမှာ ထည့်ဟောသွားတာကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်နာယူဖူးပါတယ်။“
ကို nyanakyaw ရေ
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီတရားကို audio ဖြစ်ဖြစ်၊ စာဖြစ်ဖြစ် ဖော်ပြပေးပါလား။
True Answer အတွက်
ဦးဉာဏိဿရ ရေးထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံသဘောတရား စာအုပ် စာမျက်နှာ ၁၉၉ မှ စတင်ပြီး ဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ အရိယသစ္စာအကြောင်းပြောထားတာရှိပါတယ်။
သမုတိသစ္စာဆိုတာ (အစုသစ္စာ)(သတ်မှတ်ချက်၊ သမုတ်ချက်၊ ပညတ်)အခေါ်အဝေါ်တွေကို ပြောတာပါ။ တာတွေလည်း အမှန်ပါ။ ဥပမာ အခုဒီဆိုဒ်ကို ဝင်ဖို့ လင်းဆက်ရာ ဆိုတဲ့နာမည် password တွေဟာလည်း သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လို့ မလိုဘူး။ မှားတယ်၊ အသုံးမဝင်ဘူးလို့ ပြောမရပါဘူး။ ငါ ၊ သူ၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ စတာတွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ချက်၊ သမုတ်ချက်ပါ။ အမှန်တွေပါ။ အင်္ဂလိပ်တွေက he, she, they, me စသဖြင့်ပေါ့ ။ ဒါတွေကို ဘယ်သစ္စာကနေပြီး ချေဖျက်သလဲဆိုရင် ပရမတ္ထသစ္စာ အမြင်နဲ့ဆို ခြေဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ပရမတ္ထသစ္စာ(အစိတ်သစ္စာ)ဆိုတာ အခြေခံကအစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဖြာလိုက်ရင် အစုကိုခေါ်ဝေါ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ ပျက်ပြယ်သွားမှာ ဓမ္မတာပါ။ ဥပမာ လူ ဆိုတာ သမုတိ၊ လူဆိုတာ မရှိဘူး၊ အရိုးကလူလား၊ အရေက လူလား၊ ဒါမျိုး ဖျောက်ရပါတယ်။ ငါ ဆိုတာ သမုတိ၊ ငါဆိုတာ မရှိဘူး၊ ပြောခါမျှပဲ၊ နုတ်ခမ်း နှစ်လွှာကြား ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားတာပဲ၊ ဒီလို အမြင်အယူအဆကို လက်ကိုင်ပြုပြီး သမုတိဆိုတာ အရှိမဟုတ်ဘူး။ ပရမတ်သာ အရှိလုပ်နေလို့ မရပါဘူး။ သမုတိ ဘက်မှလည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ပရမတ်ဆိုတဲ့အမည်၊ ရုပ်၊ နာမ် ဆိုတဲ့ အမည်ဝေါဟာရကလည်း သမုတ်ချက်၊ သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်လား။ ဒါကတော့ ပရမတ်သမားတွေရဲ့ အမြင်အယူအဆကို ခြေဖျက် နိုင်တာကို ပြတာပါ။ ပရမတ္ထသစ္စာကို အမှားလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ သူသည်လည်း အမှန်ပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓ မဟောတာကိုတော့ လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ မဖြစ်မီ တရားရှာရခြင်း၏ ရည်မှန်ချက်တစ်ခုက လူသားငြိမ်းချမ်းဖို့ အတွက်အခိုင်အမာ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမုတိသည်လည်း မှန်တော့မှန်၏။ ငြိမ်းချမ်းဖို့ရန် ကျင့်သုံးရမည်မဟုတ်သကဲ့သို့ ပရမတ်သည်လည်း မှန်တော့မှန်၏၊ ငြိမ်းချမ်းဖို့ လမ်းညွှန်ချက် လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းမှုဟု သတ်မှတ်ပြီး ကျင့်သုံးမည်ဆိုလည်း တစ်ကိုယ်ရေ၊ တဒင်္ဂ ငြိမ်းချမ်းမှုသာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အရိယသစ္စာ ဆိုတာကတော့ ထိုသစ္စာနှစ်ရပ်စလုံးကို အရှိအဖြစ်၊ အမှန်အဖြစ်လက်ခံပြီး၊ ထိုသစ္စာ နှစ်ရပ်စလုံးဖြင့် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်၊ ခံယူဆောက်တည်ချက် အမြင်အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် လူသားထုအတွင်း မငြိမ်းချမ်းမှု၊ အသက်မဝင်မှု၊ မဖြူစင်၊ မရှင်သန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အကြောင်းနှင့် ထိုအကြောင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်တည်မှု အကျိုး၊ ထိုကဲ့သို့ မငြိမ်ချမ်းခြင်းများမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်သော နည်းလမ်း၊ ထိုနည်းလမ်းအတိုင်း ကျင့်သုံးပါက မငြိမ်းချမ်းခြင်းများမှ လွတ်မြောက်မှု ရရှိနိုင်စေရန် လမ်းညွှန်ဆုံးမသော အမှန်တရားကို အရိယသစ္စာ လို့ ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တာပါ။
ဘာကြီင်္းတွေလည်းဗျာ နားလည်းမတော့ဘူး MG ကိုတောင်ဝင်ရမှာ ကြောက်လာသလိုပဲ သူ့ သာဝကနဲ့သူပါဆို ဘာလို့ငြင်းနေကြတာလည်း သိချင်တတ်ချင် ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ပေါ့ ဘယ်ဟာ အမှန်လည်း သိရမှာပါ စာတွေတွေ ပြောနေရင်တော့ အချိုန်ကုန် လူပန်းဖြစ်တာပဲ အဖတ်တင်မယ် အခုထိ comment အားလုံးက စာတွေများနေတယ် ကိုယ်တိုင်ကျင့် သူလမ်းဆုံးရောက်မှာပါ ဘုရားရှင်ဟောကြားသော တရားစစ် တရားမှန်များနဲ့ တွေကြပါစေ
ဘုရားရှင်ဟောကြားသော တရားစစ် တရားမှန်များနဲ့ တွေ့ကြစေဖို့ http://www.ariyathitsa.org/html/home.html ကို လမ်းညွှန်လိုက်ပါသည်။
အဲဒီထဲကတရားတော်တွေအတိုင်း စိတ်ဝင်စားရင် ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးကြည့်ပေးပေါ့။
ပညာရှင်တို့ ဖွင့်ဆိုကြသော သစ္စာသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့
၁။ သမုတိသစ္စာ (အစုသစ္စာ) – လူရဲ့ အစုဖြစ်တဲ့ လူအကောင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါ အမှန်တရား၊
၂။ ပရမတ္တသစ္စာ (အစိတ်သစ္စာ) – လူရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ရုပ်၊ နာမ် အမှန်တရား၊
၃။ အရိယသစ္စာ (အမှုသစ္စာ) – လူရဲ့ အမှုဖြစ်တဲ့ ကံ (သင်္ခါရ) အမှန်တရားကို သိကြဖို့ရာမှာ
ကိုယ်က ဘယ်နယ်ပယ်က သူလဲ၊ ဘယ်လို ရပ်တည်နေရသလဲ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကိုယ်မဖြစ်မနေ သိအောင်လုပ်ရမှာ ဘာဆိုတာကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားသိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် နှင့် အရိယသစ္စာ ကို မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်စေရန်။
i don’t know this is real or not.